घरको नक्सा-डिजाइन बनाउनुअघि के-केमा ध्यान दिनुपर्छ, कति लाग्छ खर्च? :: Setopati
घरको नक्सा-डिजाइन बनाउनुअघि के-केमा ध्यान दिनुपर्छ, कति लाग्छ खर्च?
समिक्षा अधिकारी काठमाडौं, असार १६
जुनसुकै शैलीमा बनाए पनि घरको नक्सा-डिजाइन बनाउनुपर्छ। नक्सा पास नभई नगरपालिकाले घर बनाउने इजाजत दिँदैन।
एकपटक डिजाइन गरिसकेपछि घरधनीलाई देखाइन्छ। डिजाइन मन नपरे वा हेरफेर गर्नुपर्ने भए डिजाइनरसँग बसेर छलफल गर्नुपर्छ। बासुकलाका अनुसार डिजाइन फाइनल हुनुअघि नै आवश्यक छलफल गर्नुपर्छ। एकपटक निश्चित गरेपछि सकेसम्म हेरफेर गर्नु हुँदैन।
इन्टेरियर थ्रिडी डिजाइनले बन्न लागेको घरको चार कुना, भित्र–बाहिर, भान्सा, शौचालय, बेडरूम, बैठक कोठा लगायतको बन्दोबस्त देखाइदिन्छ। फर्निचर र रङ संयोजनसमेत समावेश हुने भएकाले भोलिका दिनमा थप दुबिधा हुँदैन।
आफ्नो घर यस्तो बन्दैछ है भन्ने थाहा पाएपछि बनाउन पनि रमाइलो लाग्छ। के–के बन्यो, के–के बनेन आफैंले हेर्न सकिन्छ। साथी वा आफन्तलाई देखाउन पनि पाइयो।
बाहिरी मुलुकमा धेरै पहिलेदेखि प्रयोगमा आइरहेको डिजाइन, थ्रिडी डिजाइन, इन्टेरियर थ्रिडी डिजाइन हामीकहाँ भर्खर-भर्खर मात्र अभ्यास हुँदैछ। यसमा कति खर्च लाग्छ वा कसले काम गरिदिन्छ भन्ने अन्यौल कायम छ।
कम्पनीहरूले इन्टेरियर–एक्सटेरियर (बाहिरी-भित्री) डिजाइनसहितको थ्रिडी निर्माणमा थप प्रतिवर्गफुट सय रूपैयाँसम्म शुल्क लिने गरेका छन्। यस हिसाबले चार आना जग्गामा बन्ने साढे दुई तले घरका लागि करिब तीन लाख रूपैयाँ डिजाइनमा छुट्याउनुपर्ने उनी बताउँछन्।
'कतिपयलाई आफ्नो घर अरूकोभन्दा अलग होस् भन्ने चाहना हुन्छ। तर सधैं यो सम्भव हुँदैन। उदाहरणका लागि, भक्तपुरजस्तो पुरानो सहरको मुख्य भागमा अलग देखाउने घर बनाउन सकिँदैन,' उनले भने, 'भक्तपुरको नियमअनुसार समुदायमा आफ्नो दायित्व सम्झेर मिल्दोजुल्दो डिजाइनकै घर बनाउनुपर्ने हुन्छ। यो कुरा डिजाइन गरिदिने र घरधनी दुवैले बुझ्नुपर्छ।'
प्रकाशित मिति: बुधबार, असार १६, २०७८, १४:५५:००